Magaca iyo Sawirka Ninkii ka Dambeeyay Weerar Shalay ka Dhacay London Oo la Shaaciyay.(Sawiro) | Awdalmedia.com
Magaca iyo Sawirka Ninkii ka Dambeeyay Weerar Shalay ka Dhacay London Oo la Shaaciyay.(Sawiro)
Booliiska dalka Britain ayaa soo bandhigay magaca, Sawirka iyo dhalashada nin shalay oo gaari dad ku jiirsiiyay koontaroolka laga ilaaliyo xarunta Baarlamaanka Britian oo kutaala magaalada London.
War kasoo baxay booliiska Britain ayaa lagu sheegay in weerarka ka dhacay banaanka xarunta Baarlamaanka in uu ka dambeeyay Salih Khater oo 29-sano jir asal ahaan kasoo jeeda dalka Sudan balsa heesta dhalashada dalka Britain.
Ninkan ayaa la sheegay in uu horey u dhigan jiray Jaamacada Coventry University balse waxbarashada joojiyay bishii May, hay’adda sirdoonka ee MI5 iyo booliiska argagixiso la dagaalanka ayaan wax xog ah ka heyn ninkan weerarka ka geestay London.
Weerarka gaariga u adeegsaday ninkan dhalinyarada ah waxaa ku dhaawacmay sadex qof kuwaa oo la sheegay in xaaladooda ay tahay mid wanaagsan lagana saaray xarumihii caafimaad ee la dhigay.
Booliiska Britain ayaa hada wada baaritaano ay ku sameenayaan ninkan weerarka geestay, walina lama shaacin ninkan kooxda uu katirsan yahay iyo ujeedka ka dambeeyay weerarka uu shalay geestay.